”Raharaha kidnapping”: jiolahy 44 naiditra am-ponja, 193 tapitrisa Ar ny efa azony | NewsMada
”Raharaha kidnapping”: jiolahy 44 naiditra am-ponja, 193 tapitrisa Ar ny efa azony
Par Taratra sur 09/03/2019
Nafana vay ny ”Raharaha fakana an-keriny” (kidnapping) nandritra ny enim-bolana faharoa tamin’ny taona 2018 sy ny telo volana voalohany tamin’ity taona 2019 ity. Araka ny tatitra nataon’ny zandary, 44 ireo jiolahy efa naiditra am-ponja, enina ny maty nandritra ny fisamborana, 29 ireo mbola karohina, ary nahatratra 193 tapitrisa Ar ny vola azon’ireo mpaka an-keriny.
Nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety teny amin’ny Toby Ratsimandrava, omaly, ny nilazan’ny eo anivon’ny zandarimariam-pirenana tamin’ny alalan’ny lefitry ny kaomandin’ny zandarimariam-pirenena, ny Jly Rakotobe Christian, momba ity raharaha fakana an-keriny ity, na teto an-dRenivohitra izany na tany amin’ny faritra. Nohamafisin’ity manamboninahitra ambony eo anivon’ny zandarimariam-pirenena ity tao anatin’ny tatitra nampitainy fa tao amin’ny distrikan’i Tsaratanàna no tena nahitana trangana fakana an-keriny be indrindra nandritra ny enim-bolana faharoa ny taona 2018 lasa iny. Nambarany fa miisa 14 ireo trangana fakana an-keriny niseho tany an-toerana raha miisa 27 kosa ireo nalain’ireo jiolahy an-keriny. Nitaky vola tamin’ny fianakavian’ireo olona nalaina an-keriny ireo olon-dratsy ka nahatratra 193 tapitrisa Ar ny vola azon’ireo jiolahy tany amin’ny fianakavian’ireo olona nalaina an-keriny, araka ny tatitra nampitain’ity lefitry ny kaomandin’ny zandarimariam-pirenena ity hatrany. Ankoatra izany, nisy koa ny trangana fakana an-keriny, nandritra ny telo volana lasa tamin’ity taona 2019 ity ka isan’izany ilay tranga farany tamin’ny heriny androany (jereo ny lahatsoratra pejy faharoa) mbola tsy voavaha satria mbola any am-pelatanan’ireo jiolahy ilay zazakely vao 6 taona monja hatramin’izao.
Karohina ry Moustapha Raza sy ny namany…
Nahery vaika ny fifandonana tamin’ireto andian-jiolahy mpaka an-keriny ireto satria nahatratra enina ny isan’ireo jiolahy maty voatifitra nandritra ny fifandonan’ireo jiolahy sy ny zandary. Nisy kosa ireo azo sambo-belona ka naiditra am-ponja eny Tsiafahy sy Antanimora.
Raha ho an’ny teto an-dRenivohitra manokana, jiolahy miisa 16 no indray voasambotra tao anatin’ireo trangana raharaha fakana an-keriny miisa efatra tao anatin’izay telo volana voalohany lasa izay tamin’ity taona ity. Jiolahy telo kosa maty nandritra ny fifandonana raha miisa 29 ireo an-dalam-pisamborana ka isan’izany ry Laks, Rams, Beau Gosse, Godongodona, Sôla ary Moustapha Raza, izay samy jiolahy raindahiny amin’ny fakana an-keriny, raha ny fampitam-baovao nomen’ny eo anivon’ny zandarimariam-pirenena, omaly. Misy amin’ireo no miampy raharaha vonoan’olona ihany koa. Tratra nandritra ny fisamborana ireo jiolahy kosa ny fitaovam-piadiana mahery nahitana basy PA miisa dimy, basy Kalachnikov iray ary grenady miisa roa.